Hydroponic mbanje inokura | MyWeedSeeds.com
Mbanje yeHydroponic kukura
General mbanje hydroponics
Kuti ushandise mazwi akareruka, kukura kwehydroponic kunosanganisira kurima mbanje dzako pasina ivhu, asi pachinzvimbo uchishandisa mvura kana imwe nzira yekukura iyo inokwanisa kusanganiswa nemushonga wemuviri wekudyisa zvese zvinovaka muviri kumiti yako yembanje kuburikidza nemidzi yavo zvakananga. Zviri nyore chaizvo!
Nzira yekurima mbanje hydroponically
Unogona kunyatso shandisa chinenge chero chikamu cheimba yako, garaji kana kudira kuti urime zvirimwa zvemukati zvembanje. Ingo rangarira kuchengeta iyo yakakosha yezvirimwa inoda mupfungwa kana uchigadzira yako inokura nzvimbo. Kana iwe usina chokwadi kuti chii chirimwa chako chembanje chinoda, saka chimbofungidzira uchitarisa kubindu rako pakati pezuva ...
Nyore dzinoitwa hydroponic masisitimu
Kune kuwirirana pakati pevarimi vembanje mbesa kuti hydroponically yakakura cannabis zvirimwa zvinokura pamwero unokurumidza kupfuura ivhu, kana mamwe mamiriro ese akafanana mukati mezvakatipoteredza. Izvi zvinogona kunge zvichikonzerwa nemidziyo inodzorwa yekudyisa chirimwa inopihwa uye yakawedzera okisijeni inowanikwa kumiti.
Inoshanda uye Passive hydroponic masisitimu
Kwemakore akati wandei apfuura, hydroponic masisitimu akauya nenzira yakareba. Haisi imwe nzira hombe yakavanda kana chakavanzika chakarasika. Panzvimbo pezvo inzira yakatendeka uye yakapusa kurima mbanje. Zviri nyore kwazvo uye nzira inoenderana pane kukura muvhu. Izvo zvinongoda kugona kweashoma eakakosha masimboti anoshandiswa kuburikidza nhanho-nhanho hwaro.
Yakakosha hydroponic Rockwool system
Iyo yekutanga system yatiri kukurukura inoenderana nekushambadzira kushandiswa kwekurima mbanje zvirimwa. Icho chinangwa ndecheye chete-yetsika maitiro ekurima, uye haizoshanda pamwe nemusanganiswa gadheni. Iyo dhizaini inodzokororazve mhinduro yezvinovaka muviri, saka kana ukaronga kushandisa yakazara-kurasikirwa sisitimu, iwe unofanirwa kuwana hombe tangi uye woita zvigadziriso zvekumhanya-kure.
Yakanakisa huwandu hwehutanho hwekukura kwezvirimwa
Mushure mekunge mbanje dzako dzamera, dzinotanga kukura zvinomera. Izvi zvinobatsira mbesa dzako kukura zvakanyanya kureba kuburikidza nefotosinthesisi, zvichibvumira kuwanda kwemazano kukura kuitika pamusoro pese seti yemashizha embanje. Kukura matipi ndiwo chikamu chemuti wembanje unogona kutemerwa matombo, kana kubereka kweasexual.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve hydroponics
Munguva yedu nguva mubhizinesi se "Hydroponics uye Organics", zviuru zvevanhu zvakagovana nesu. Vazhinji vevanhu ava vaiziva zvishoma nezve hydroponics uye mashandiro acho aifanirwa kushanda, asi havana kunyatso kupa maitiro zvakanyanya kufunga. Izvi zvinodaro nekuti ivo vese vakabatirira pane dzimwe pfungwa dzisiridzo dzakatenderedza nzira yekukura vachishandisa ...